Rehefa mahatsiaro ho sarotra ny fitomboana: fampifanarahana, fanoherana ary ny dian'ny mahery fo - Fanahy
Misy ny fanantenana iraisana - indrindra eo amin'ny faribolana mahatsiaro tena sy mahatakatra ara-panahy - fa raha vantany vao mandeha amin'ny làlantsika marina isika, dia hisokatra ny varavarana rehetra ho antsika izao tontolo izao ary hahafahantsika miroso am-pitandremana mankany amin'ny anjarantsika. Toy ny ahitra maniry mora foana, toy izany koa ny fivoarantsika mankany amin'ny fiainana tsaratsara kokoa antenaina ho malama sy mahitsy. Mety ve anefa izany fanantenana izany ary manompo antsika?
Ny fiandrasana ny fahamoranana dia avy amin'ny trangan-javatra voamarina tsara, izany hoe ny làlantsika tena izy dia napetraky ny signpost fampitahana . Ny fandalinana ireo 'fifanandrifian-javatra misy heviny' ireo dia miverina amin'ny mpitsabo aretin-tsaina Swiss, Carl Jung. Indray andro, raha nilaza taminy ny nofy iray ny marary marim-pototra loatra, dia nisy bibikely iray nitifitra teo am-baravarankely. Noraisin'i Jung ilay bibikely ary nomeny an-dravehivavy: 'Ity ny lambanao,' hoy izy. Ity kisendrasendra tampoka ity dia nahatsapa ho nisy dikany lalina tokoa taminy izay “nanindrona ny lavaka irina ho tonga mahay mandanjalanja”.
Ity fisehoan-javatra ity dia hita fa tsy ny psychotherapists ihany no misy ifandraisany fa ny mpikatsaka ara-panahy amin'ny karazany rehetra. Raha vantany vao manomboka mahita ny lalantsika isika, dia sendra ireo fifanandrifian'ny majika, izay tsy misy dikany fotsiny, fa manampy. Hitanay 'kisendrasendra' ny boky na lahatsoratra izay mamaly ny anay fanontaniana , 'tsy nahy' nifanena tamin'ilay olona hanampy antsika hanatratra ny tanjontsika isika, na mahita famantarana mipoitra izay mitondra antsika any amin'ny trano mety, olona mety, karazan'asa mety.
zavatra mahafinaritra hatao rehefa any an-trano irery ianao
Ny fitsipiky ny fampitambarana mbola tsy voafaritra, na izany aza tena izy, dia miasa eto, izay mampifandray ny tontolontsika anaty sy ny zavatra niainantsika ivelany. Arakaraka ny andalovantsika ny feontsika no mahatonga antsika 'ao anaty' bebe kokoa, dia matetika isika no mahatsapa fitoviana.
Midika ve anefa izany fa ny fitomboan'ny tena manokana dia mora foana toy ny mandeha amin'ny lalana feno lalana? Midika ve izany fa hahatsapa ho tsara sy tohana isika eny am-pandrosoana mandritra ny fiainana tsara kokoa? Midika ve izany fa isaky ny sendra sakana sy zava-tsarotra isika dia eo amin'ny lalan-diso?
nahoana no zava-dehibe ny faharetan'ny fotoana
Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo dia tsy maintsy mahatakatra zavatra manan-danja momba ny natiora fototra amin'ny fiainana isika. Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-20, nandinika angano, angano, angano avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao i Joseph Campbell, ary tonga tamin'ny fehin-kevitra nahagaga: ny tantara rehetra eto an-tany dia mizara rafitra mitovy, izay nantsoiny hoe 'Dia ny Hero.' (Amin'ny maha mpitantara ahy ny tenako dia nanandrana namorona tantara tsy nety aho. Nanandrana ny ho mpisolo vava ny devoly dia mbola tsy vitako izany! Isaky ny nahita zavatra ivelan'ny tetiarana Campbellian aho dia tsy nahomby izany Tantara. “Boky telefaona” fotsiny izy io. Tsy nanana dinamika io.)
Ity firafitra fototry ny tantara iray izay hitan'i Campbell ity dia efa lalim-paka lalina ao anatin'ny fahatsiarovantsika, ka toa izany ny drafitra, tsy ho an'ny tantara foronina fotsiny, fa ho an'ny fiainana mihitsy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fiainantsika manokana dia mifanaraka amin'ny drafitra Campbellian!
Tsaroako ny resadresaka mahaliana nifanaovako tamin'i Dr. Raymond Moody, rain'ny fandalinana saika maty, izay nanasongadina fa izany koa no nolazain'ny olona efa niaina tamin'ny fahafatesan'ny klinika: 'Amin'ny fotoana fahafatesany dia mijanona tsy ho tantara intsony ny fiainana.' Ny fiainana dia tantara, izay mifarana amin'ny fotoana ahafatesany, rehefa rava ny hevitra momba ny fotoana sy ny habakabaka ary zavatra iray hafa tanteraka.
Raha mbola velona koa isika, dia tantaram-piainantsika ny fiainantsika, izay anananay drafitra: The Hero's Journey.
Toy ny ny mahery fo amin'ny tantara rehetra , rehefa manaraka ny antsontsika hanao traikefa an-tsehatra amin'ny fiainana isika dia mifanena amin'ny namana manampy. Saingy sendra fahavalo koa isika, ary koa fitsapana sy fitsapana maro. Raha tsy misy ireo dia tsy afaka mihamatanjaka isika ary tsy afaka mivoatra.
Hevero ho toy ny fampiofanana fanoherana izany. Raha te hampivelatra hozatra matanjaka isika dia tsy maintsy manome azy ireo fanoherana izay tokony hoterentsika na hampiakarana ny lanjany izay ivelan'ny faritra mampionona antsika, na tokony hanao famerimberenana bebe kokoa isika na fotoana lava kokoa noho ireo efa nahazatra antsika. Ny hery rehetra eo amin'ny natiora dia misy fanoherana. Raha mametraka fikasana mahery vaika hamorona fiovana mahery vaika amin'ny fiainantsika isika dia afaka manantena fanampiana, nefa koa fanoherana! Raha miresaka ara-psikolojika, ny fihaonana amin'ny fanoherana dia mety hanampy amin'ny lafiny maro. Mampiseho antsika ny toerana misy ny tahotra ary ny fahalemena dia, ary ny zavatra tokony hianarantsika mba hivoatra amin'ny ambaratonga vaovao.
Noho izany, tsy tokony hilavo lefona isika ary hino fa diso lalana isika, satria fotsiny hoe tojo fanoherana sy hiaina fotoan-tsarotra! Manana namana tena mifantoka amin'ny ara-panahy aho, izay mino fa isaky ny mandeha amin'ny lala-mahitsy izy dia tsy maintsy hitranga tsy misy ezaka. Ohatra, nanomboka namboly legioma tao an-jaridainany izy, satria nahatsapa antso iray hiaina fiainana voajanahary kokoa. Na izany aza, rehefa nihinana ny vokariny voalohany ny slugs, dia nilavo lefona izy nilaza fa 'tsy tokony hatao izany.' Tsy fisainana mandanjalanja izany. Raha tokony ho izany dia azony natao ny namorona fomba organika sy sakaiza hiarovana ny legioma amin'ny slug ary nizara ny zavatra hitany tamin'ny mpikarakara zaridaina.
Mety, mety hanontany ianao, fa ahoana no hanavahana ny 'fanoherana ara-dalàna' izay tiana resena, amin'ireo famantarana fa tena eo amin'ny làlana diso isika? Fanontaniana tena ara-dalàna sy lehibe io. Ny valiny dia mitoetra amin'ny fijerena ny toe-javatra iray manontolo. Raha toa ka tsy nahatsapa ho tsara hatramin'ny voalohany ny lalana efa natsangatsika, raha tsy nahatsapa fiantsoana manokana an'io izahay, na niaina fampitambarana mahasoa, dia toa tena lalan-diso izany.
Na izany aza, raha nahatsapa fientanam-po sy fahatsapana tanjona kendrena izahay hanombohana sy hihaona amin'ny fanampiana eny an-dàlana, nefa koa hiaina zava-tsarotra sy fanoherana, dia afaka mitsabo ireo zavatra ratsy rehetra miseho toy ny biby goavambe ao amin'ny angano - ireo no sakana natao handresy isika. Ny fomba fanao toy izany dia hahatonga antsika ho matanjaka sy hendry kokoa amin'ny farany ihany.
iza no khloe kardashian manambady
Mazava ho azy, misy fahavalo iray tranainy sy mahery indrindra izay mety hahatonga antsika tsy hahatsapa ho ratsy na dia efa manakaiky ny tsara indrindra aza ny fiainana. Io fahavalo io dia TAHOTRA . Voafetra hijanona ao anatin'ny fameperana toe-javatra fanta-daza, amin'ny maha-olombelona antsika dia tsy maintsy hiaina tsy fahazoana aina sasantsasany isika rehefa miova ny fiainana, na inona na inona mety ho tsara na ho ratsy kokoa. Noho izany, atsofohy ary avelao ny tahotra andehanantsika mandritra ny fotoana mikorontana isika, fa amin'ny fomba hafa ahoana no hahaterahan'ny vaovao raha, tsy avelantsika hofoanana ny taloha…
ahoana no hahalalana raha tianao ny ankizilahy
2017 wwe mandoa isaky ny fandaharam-potoana
ny fomba hahazoana ny vadiko fa nandao ahy vehivavy hafa
top 10 zavatra tokony hatao rehefa mankaleo ao an-trano ianao